Xa Abaphumeleleyo Jonga pempe — UHAMBO LEE - SITE OFFICIAL
Yintoni abaphumeleleyo kanje? Ngaba omde okanye omfutshane? Black okanye amhlophe? Ukubabomelele, bangamaphakuphaku? Ndiyaqonda ukuba ixhomekeke koko ukuthini “ophumeleleyo.”
Mna ukumvumela ibali ophumeleleyo omnye kule nyanga edlulileyo njenge ukufunda ende, kodwa biography nezisebenzisayo of Michael Jordan. Ingxelo eneenkcukacha Wandikhumbuza kutheni phithi abantu abaninzi kunye naye ephelela unqulo hero. izinto ezininzi enokuthethwa “airness yakhe” kodwa akukho mntu unokuze ibango ukuba akukho ziintshatsheli. Ngaba Yakhangeleka ziintshatsheli ngaphambi zonke ezo emakhonkcweni ubuntshatsheli, nangona?
Njengoko ufunda le ncwadi, kwakuye kucace ukususela ebuntwaneni bakhe ukuba wayeza kuba yintshatsheli. Enoba sasiyintoni umdlalo wakhe obalaseleyo njenge league umphanda encinane okanye Varsity junior ngumdlali basketball; umbuku kwisikolo esiphakamileyo okanye umdlalo wakhe ngokuphumelela shot ebudeni bonyaka freshman wakhe unc.
Xa ndafika kwizahluko malunga ubuntshatsheli bakhe Chicago Bull, bekungekho ezothusayo. Umbhali wathi ibali lakhe ngendlela eyenza kucace: EYordan wazalelwa ukuba ziintshatsheli. Kwaye nantso into siyamazi ngenxa: ngokuphumelela amakhonkco ezintandathu ubuntshatsheli, MVPs ezintlanu, kwaye 14 Zonke imbonakalo Star (singasathethi wobukumkani bakhe azithethayo emdlalweni yezihlangu lweembaleki).
Olu hlobo wobukumkani azithethayo nto idla qatha engqondweni kuqala xa sicinga “ophumeleleyo.” Kodwa ndifuna ukuba baziphe ithuba ngolunye uhlobo ophumeleleyo. Uhlobo ophumeleleyo ongenayo zonke makings ye uyintshatsheli. Uhlobo ophumeleleyo ogama iimposiso ukubavelela ngaphezu ezintle bakhe. Uhlobo ophumeleleyo okhangela ngaphezulu ndingungantweni amaxesha.
yoyiswa, kodwa Ukoyisa
Ndiza kuba inyani. ziye emangalisayo minyaka mibini idluleyo ngeendlela ezininzi, kodwa ndiye nazo nzima. Ndiye ngolonwabo emtshatweni owomeleleyo ekuqaleni ubomi ezimbini. Ndiye nivuyiswe minsitry abefundisi ecaweni esempilweni. Kodwa ndiye kwakhona yathwaxwa ubuthathaka. Kunzima bangaphandle ukuxelela ngamanye amaxesha kuba ndiya kubonakala ukuba ukwenza izinto ezininzi ezintle. Kodwa ukuba nje wabona basondela kancinci.
Ndiya kuba chronic fatigue syndrome. Ndiyazi, Andizange ndive nto phambi nokuba. Mhlawumbi yiloo nto xa undibetha nje ndizive ngathi mingxunya njengehlumelo ngaphezu kwinkxalabo nemibutho. Ekuqalekeni ngokwenene abalimeleyo mbeni Ndandineminyaka nje niphaphile iiyure ezintandathu ngosuku, kwaye ediniwe kuba ezinye elinesibhozo. Kulo nyaka uzayo oko ukufumana ngcono, kodwa nangoku bandishiya iqokobhe koko ndandidla ukuba. Ndiye ndahlala iminyaka esixhenxe yokugqibela kunye fatigue neverending. Mna ngokunyanisekileyo andikhumbuli ngexesha lokugqibela ndaziva rested- ngathi ebhetri wam wasweleka, kodwa akazange akulifaki.
Energy ufana amafutha ukuba amagunya kwimimandla yonke yobomi bethu. Sifuna ukuba wonke umsebenzi, yonke incoko, zonke iingcamango. Ke xa amafutha iphantsi, yonke nzima. Ngesizathu esithile, umzimba wam akayi makhe imane. Endaweni itanki yam alisileli kunene ngentla “E,” kwaye ndizama ukwenza oko ngenxa. Oku awayeka kum nimbaxa kuyo yonke indawo ebomini bam.
Ndithi kuni, yonke le, hayi ukusizelwa yakho, kodwa umngeni ocinga ngayo. Abanye khangela abekiweyo eziphosiweyo, imihla anzima, imeko athile emtshatweni wam, kwaye ucinge, “indoda, lo mfo ilahlekelwa ngoku.” Qiniseka ndijongile nje nokulahlekelwa xa kufuneka ukutshintsha izicwangciso ubomi bam kwakhona okanye umxelele unyana wam, “Zotata udinwe kakhulu ukudlala ngoku.” Ndiya ayeza kumlalela ukuba ndithe akuzange anzima kwaye uzama. kanti, Nangoku ibango uloyiso wam inencasa.
Hayi, Mna ndingelilo uhlobo angaphezu olomeleleyo ophumeleleyo; Mna intle buthathaka. Ndingu ngohlobo olwahlukileyo ophumeleleyo. Kwaye ndiyarhana baninzi phakathi kwenu kakhulu.
Uhlobo ezahlukileyo Ophumeleleyo
Ndiya kwenza uloyiso, kodwa hayi kuba amandla am iye yafumana oko. uloyiso yam kwenzeka nangona ubuthathaka bam, nokuba izono zam. Mna hayi victor lowo woyisa iintshaba balinqabisa waphumelela; Ngokwenene bafumana nje. Ndiya uloyiso uYesu.
UPawulos uthi ngolu hlobo okumaRoma:
Njengokuba kubhaliwe kwathiwa, "Ngenxa yakho si ya sibulawa imini yonke; yiyo loo nto sesifana neegusha eziya kuxhelwa nje. "Akukho, zonke ezi zinto soyise ngaye lowo wasithandayo thina” (KwabaseRoma 8:36-37).
UPawulos ucaphula kwiNdumiso 44, apho uMhubi iyakhala uncedo lukaThixo phakathi kwetyala. Wathi uPawulos usebenzisa loo vesi ukwenza ingongoma yakhe ukuba akukho nto akujikwa uThixo asenzele zona kuKristu.
Enye yezinto ediliza kukuba emva kokubaxelela izinto ezoyikekayo: babulawe, xhelweni, UPawulos uthi na kwezo zinto njengaboyisi. Naxa siphulukana, siya ngokuphumelela. Nokuba xa ukhathazwa ezoyiswa kweli hlabathi bewile, sihlala sigqithisele, uYesu. Amadabi ezincinane ngemihla musa abone isiphelo sethu, ngokuba imfazwe sele iphumelele. Ngaba loo ndinise themba eningenakukholwa? Ukuba siza kuKristu, sinako ngokwenene singalahlekani.
Ingayiyo, njengam, uthandana ngexesha lobunzima. Ndifuna ukukhuthaza wena kunye iindlela ezimbalwa ndicinga ngayo le nyaniso.
1. Musa nje Jonga wena
Xa bachitha usuku lwam ugxininisa ubuthathaka bam bembombozela entliziyweni yam, Ndiya kuwalusa ukudimazeka yam kuphela mbelela ingqiqo yam zobuxoki nathemba. Xa nisijonge mna ndicinga ukuba ezilahlekileyo, kodwa xa nisijonge uYesu mna ziyakhunjuzwa ukuba kuphumelela. Xa oyise iintshaba zakhe, yena ndo kubo egameni lethu.
2. Musa nje Jonga ngoku
Ukuba ndithe kugxininisa kuphela namhlanje okanye kule minyaka imbalwa idlulileyo, Ndide ndifune ukuba ndicinga le ndlela yindlela kuya kusoloko. Kodwa uYesu uthenge izinto kungakholeleki kum emnqamlezweni ukuba andifumananga expereienced okwangoku. Ndiyazi uThixo abangafezekanga ngoku, kodwa ukuba simazi kakuhle kamva. Ke ndiza ndinike umzimba entsha kraca kwaye kuzisula zonke iinyembezi zam.
Kwakhona inokuzibona abo babonakala ukuba ngokuphumelela ngoku. Abo abangenazo izilingo efanayo ziphazamise ukuba kusoloko kubonakala ukuba khathaza. Kodwa iqela loo nto esiwinileyo kwikota yesithathu akusoloko iqela eliye ekupheleni. Abantu abaninzi kubonakala ukuba kwidabi amadabi ngemihla, kodwa Ndakholosa Lowo Kobakh imfazwe. Musa nje jonga ngoku.
Michael Jordan uhlala omnye abaphumeleleyo ubalaseleyo ithandwayo endakha ndayibona. Kodwa kukho kokuphumelela ezinkulu Ongofanelwe. Kwaye akukho namnye kuthi yonke into efunekayo ukuze aphumelele emfazweni thina; Kristu kuphela onokuyenza loo. Uyayazi ndazisusa zonke iintshaba zethu kuthi: ngaphandle, uSathana, nokufa ngokwako. Ukuze siwaphumeze kufuneka bazibandakanye iqela kwaye inzuzo evela kokuphumelela kwakhe ayaguquka esonweni ikholose uMsindisi. nabani, nelona bhetyebhetye phakathi kuthi babe ngabaphumeleli.
Le nyaniso okube kusentliziyweni yam xa wabhala la mazwi “Uloyiso Sweet”:
Icikidekile asinguye lowo nto ngokuphumelela INNING_NUMBER yesixhenxe
Ndiya kuthetha ukuba imini xa isibhakabhaka ezingwevu kuphelelwa phandle, ke ndiza ngokuphumelela kuba ngookumkani kunye naye
Qiniseka ukuba makawuthathele ikopi “phakama” xa uphuma 10.27.14!
kaLiam • EyeDwarha 23, 2014 ngexesha 12:44 pm • impendulo
Uhambo bendikhe ukudlala uloyiso elithozamisayo non-ukumisa ntsuku zimbalwa zidlulileyo, kukusebenza kukaThixo ebomini bakho kwaye uza ukusebenza icwecwe yakho. Ukunithandazela
Emerson Tillman II • EyeDwarha 23, 2014 ngexesha 1:08 pm • impendulo
UThixo anisikelele bhuti.
Victoria Jones • EyeDwarha 23, 2014 ngexesha 1:17 pm • impendulo
Eli lizwi eyoyikekayo ezifana. ingoma yakho isichaza ulwalamano entsonkothileyo phakathi kwimizuzu uzuko, kunye nemigibe angalawulekiyo. Enkosi. Ngoku ndiyazi ukuba yonke into, okulungileyo nokubi, sihla sivela kuye uYise wezikhanyiso.
yonke into • EyeDwarha 23, 2014 ngexesha 1:48 pm • impendulo
Funda Great! Mna ke bayakhuthazwa yile! Mna ndicinga le ngoma!
Steve • EyeDwarha 23, 2014 ngexesha 3:43 pm • impendulo
uhambo, le ngoma ibe yintsikelelo enkulu ebomini bam sele! UTata nodade wam eminye imiba yempilo ukuba baye ngayo iminyaka eliqela kunye nenkcazelo yakho kutheni nendlela wayibhala ingoma emnandi nentuthuzelo. Enkosi unyanisekile ukholo lwakho kwaye iindaba.
nathan • EyeDwarha 23, 2014 ngexesha 5:06 pm • impendulo
Mna iyankwantyiswa ukuba sengqondo wakho esenamandla ngexesha ubuthathaka. Imodeli indima ngokwenyani.
lydia • EyeDwarha 23, 2014 ngexesha 10:41 pm • impendulo
Oku kukhuthaza gqitha kum. amandla yam ibe kwinqanaba elinye ngowakho kwiminyaka emibini edlulileyo… Mna andisenayo sisifo Lyme esinganyangekiyo kwiinyanga ezimbalwa ezidlulileyo nokudinwa wam ekugqibeleni ukhanya! Ndiyathemba ungenza ekugqibeleni ukufumana into kunceda ukuba! Uyafana ngokwenza njalo njalo kakhulu ngaphezu kokuba abantu baqonde. Yeqonga kuwe! Wena uyasikhuthaza kum :)
Cheyenne • EyeDwarha 23, 2014 ngexesha 11:52 pm • impendulo
Umntakwethu chronic fatigue yaye ndandifuna ukwazi ukuba ndikwazi uwuhuke nina nobabini phezulu ukuze akwazi ukuthetha nawe?
Denise • EyeDwarha 24, 2014 ngexesha 1:41 mna • impendulo
UThixo anisikelele Mr. Barefield. Ndiye elahlekelwe unoyolo ukubukela neentshumayelo zakho, ukuphulaphula umculo wakho, ukufunda amanqaku akho kunye nezithuba. Ndithandaza ngokungummangaliso ephilisa egameni anamandla uYesu phezu umzimba wakho. Ndithandazela amandla engapheliyo nokunyamezela ukuyiphatha ukuze ungenza seNkosi kusebenza ngaphandle kwamagingxi ediniwe kodwa sihlaziywe ngalinye yonke imihla. Ndithandaza iintsikelelo phezu kwenu, Jennifer kunye nabantwana bakho ababini abancinane. Ndiyambulela uYehova kuba Williams ukuthobela ubizo lwakho ebomini bakhe sobufundisi, umyeni, utata kunye nenkqubo yamagcisa. Makhe ukukhanya kwakho kuqhubeka malukhanye thru ebomini bakhe. Enkosi Bawo, egameni likaYesu ngayo, Amen.
Duran Lowery • EyeDwarha 24, 2014 ngexesha 12:32 pm • impendulo
Ndingu likholwa. Kuluntu namhlanje kulula kakhulu ukufumana icala zilandelelwe nexhala ngendlela abanye abantu baphile ubomi babo. Ayikwazi ukulinda SUKUMANI ukuba uphume. Uhambo u ngenene ayasivuselela ukuba ndibe ndoda ilungileyo ubawo ukuba umfazi abantwana.
Patrick • EyeDwarha 24, 2014 ngexesha 12:49 pm • impendulo
uhambo, enkosi lokwabelana umntu intliziyo yakho. Inyaniso uphethwe kwaye basakwazi ukuvelisa umsebenzi kubulunga kuyavuselela. UThixo ngokwenene umculo lakho ukuthetha ukuba ubomi bam. Kwaye Ndinombulelo kakhulu kukho guys onjengawe umculo (ngokukodwa hip-hop) kwishishini abangengabo ukoyika inyaniso engangxengwanga. Ndiyathemba Vuka ayikho icwecwe lokugqibela, kodwa ukuba, Ndinombulelo kakhulu konke uyenze undifundise lwangaphambili 4 albums.
vince • EyeDwarha 24, 2014 ngexesha 1:00 pm • impendulo
Ndisoloko bakhuthazwa izithuba yakho bhuti oku kunokuba abe mnye ogqibeleleyo! Ndiza uthandazela amandla akho kwaye ukulinda ukuba zegosa yelicwecwe!
Charlana • EyeDwarha 24, 2014 ngexesha 1:16 pm • impendulo
Ndiyakuthanda ngokwenene ingoma yakho “Uloyiso Sweet”, sihlale phinda & Ndikhangele phambili ukuva abaseleyo CD. inkosi ikusikelele & usapho lwakho & waqhubeka impumelelo kuwe!
chester • EyeDwarha 24, 2014 ngexesha 1:26 pm • impendulo
Kutshanje ndabona ukusebenza kwakho ngelixa apha Denver Oktobha 9. Ndandingazi malunga zakho izifo impilo de kube ngoko. yachukumiseka xa wenza ingoma yenu ngokunzulu “Uloyiso Sweet.” Nam ndizama izigulo ezahlukeneyo emzimbeni lisondele ixesha leminyaka emine. Ngoko ke, ingoma yakho resonanted nam, bandithulisayo elunxwemeni iinyembezi. Ukuba ufunda nje iqhekeza yakho ugula, Ndiye ndafumanisa ukuba owayehlamba into enye mna ixesha elithile: Chronic fatigue syndrome. Kwakungenxa imizabalazo yam emzimbeni ukuba ndinyanzelwe ukuba reliquish ikratshi bam ubomi nokuzifica wandisa umva ukuzinikela okutsha uKristu; ekugqibeleni, Ndinombulelo ukuba oku kwenzeka kum. Ndiye ndadibana kuphela omnye umntu lowo ingcamango oluchanileyo imingeni ukuba esi sifo uzisa. Mna kumpha kunye kwemini ubabalo lukaThixo, imithandazo kwabanye, kunye nokuzinikela zabantu kweyo- umfazi wam oko kuyandinceda kuqhubeka iinjongo zikaThixo nje ndiqhubeke nezifundo zam uye entsimini sobulumko. Sikhonza uThixo hayi njengomhlobo kuphela uyayiqonda yeentlungu zehlabathi, kodwa yoyisa kulo. Enkosi inkonzo yakho yobukumkani bukaThixo kunye nokuveza iinkcukacha ngobomi bakho.
christian • EyeDwarha 24, 2014 ngexesha 1:51 pm • impendulo
uhambo! Wena lukhuthazo ngomculo kunye kwiintshumayelo wakho bro! Uthando ukuba uThixo usebenzisa kuwe! bangers bakho kum goin bro ! Ndiza kukuthandazela nawe! Yho IGood khangela ngaloo ngoma kakhulu!
uMitch • EyeDwarha 24, 2014 ngexesha 2:31 pm • impendulo
UThixo akusikelele ngenxa yokholo lwenu olungagungqiyo Ndiyathemba ukuba uya kundiphilisa ndize kunenza yonke lokwenene Shweet Victory!!! Makube lubabalo kuThixo…
Mackender • EyeDwarha 24, 2014 ngexesha 2:43 pm • impendulo
Mna kakhulu wabasikelela eli nqaku. Intliziyo yam idlamkile njengoko ukufunda bakugqale ilifa lam elizayo kuKristu. Enkosi atripe. Ayikwazi silinde ukufumana yelicwecwe. Ndikhe usoloko nisikelelweyo ndoda.
Ulexiz D. Clanton • EyeDwarha 24, 2014 ngexesha 3:43 pm • impendulo
oku bakwenza oko kwakufuneka bayifunde baze ngokwenene Sweet Victory ichukumisa intliziyo yam. Enkosi Uhambo lokwabelana oko uThixo wamnika u ngoko siyakwazi ukubona umbono wakhe ebomini bethu!! Ukuthandazela u!
Isaya • EyeDwarha 24, 2014 ngexesha 4:05 pm • impendulo
Uthando umculo indoda yakho. Ngayo kunye nezinye hip hop umculo lwamaKristu kwaye yaye iya kuqhubeka ukunceda uThixo ukutshintsha ubomi bam. umzabalazo wethu ngonaphakade njengokuba nawe usazi kakuhle yiTripp. Enkosi khumbuza.
GabeTaviano • EyeDwarha 24, 2014 ngexesha 5:50 pm • impendulo
Enkosi ngokuba ekuhleni, uhambo. IntshukumoName ifam yethu EKhambodiya ngoJanuwari 3rd. Ndiya kuba imibuzo yabucala embalwa kuwe, ndithembe ukuba ucele ngaphambi kokuba sihambe. Ngaba mhlawumbi ukundidubula ye email (kwi email ndandidla izimvo apha)? Ukukhangela phambili yam pre-umyalelo SUKUMANI. umsebenzi omkhulu ngokwenene!!
ChristyCapp • EyeDwarha 24, 2014 ngexesha 11:05 pm • impendulo
Mna ke ndifuna’ kuyithumela album!! Thats ingoma kakhulu ukuqala ngamanzi. italente oyinyaniso lyrics ngokwenene ukutshintsha ubomi.. ayikho nothin’ ilunge ngaphezu kokuba! CFS ingena kwaye buhlungu. Ndinayo ngexesha 18 kwikholeji xa siphuma. Kodwa unako ukuyoyisa kwaye wena will..with ukutya efanelekileyo excercise. Ngoko kukho ithemba! umthandazo kuqala, amanzi kwiyure nganye. Ndiya amanzi mhlobo wam ukuba abuko, wonqanyulwa umgubo emhlophe, ipasta nokutya ukutya. Uninzi lwethu Walk’ ngeenxa emzimbeni kwaye endaweni yokutya kakhulu. Nto zethu kwizilingo ukuba usebenza kuthi eyona. Kwelo xesha ukuguliswa (nangoku) ukuba xa uThixo yeyona nako ukwenza umsebenzi wakhe… iminqweno Best kuwe icwecwe yakho ifam yakho ecaweni yakho & yimpumelelo kakhulu gqolo!
uYesu • EyeDwarha 25, 2014 ngexesha 6:00 mna • impendulo
ingqiqo kuhle, oko ihlabathi laliza kuba sibone njengoko “yokulahlekelwa” kobu bomi. Xa zonke nisweni sonke boyisiweyo bangoku ba, kubandakanywa nabo, ukuba ihlabathi liza “abaphumeleleyo”..! ukuba, abayi kufika “ulwazi” okanye “esazi” iNyaniso, oko ikukuthi “UYESU”, bahlala abo boyisiweyo ..! Nokuba ku, ukuba ihlabathi, angacinga ukuba babe ngabaphumeleli ..! Enkosi ukuxelela “ubuthathaka”, xa NANTSI, sele yenziwe STRONGE ..!! Makabongwe uNdikhoyo, ukuba ukubazisa angayazi kuthi amandla ethu ukuba ngokwenene thina STONGE ngenxa lokumazi…!! Gcina ngokucinezela phambili umhlobo wam umzalwana nokuba INkosi unika kuphela bobabalo lwakhe kwenkungu owatyhubela ..!! Ndithandaza Kuwe ..!
ashley • EyeDwarha 25, 2014 ngexesha 9:16 mna • impendulo
Ndandingazi ukuba besijamelene eli dabi. Ndifunda incwadi yakho, “ubomi entle” okwethutyana emva koko andikhumbuli ndibona ukuba. Mna ke sisikelelwe inqaku lakho namhlanje, wena emithandazweni yam umzalwana. umza wam unesifo esinganyangekiyo fatigue syndrome kwaye kunzima kakhulu kuye ukuba banandiphe izinto awayedla. Enkosi ngokwabelana, Intliziyo yam uya kuphuma kuwe nomfazi wakho namhlanje. Umlo olungileyo. Wena ntshatsheli Liyinyaniso. Uthando uYesu lowo woyisayo zonke. P.s. zeon ingoma kakhulu!
uRakeli • EyeDwarha 25, 2014 ngexesha 10:36 mna • impendulo
Ndinombulelo woloyiso Sweet. Ndaphulaphula on YouTube yaye wandinika yintlantsi wam umva. Mna kudala ekhathazwa ezidimazayo. Ndicinga lidakile ithemba lam apha kwiiveki ezimbalwa. Ayikwazi cinga ngendlela enye ukuwubuza. Ukungabinathemba yandenza ndizive kunqunyulwa kuThixo kwaye eyona nto inzima kuzo zonke. Mna abakhala kuye, ndimcela ukuba andincede kule lithemba olungathethekiyo. Yakho Sweet Victory lyrics wathetha ngqo kuloo ndawo eyaphukileyo ngam retriggered ithemba lam. Eli nqaku uye wandikhuthaza. UThixo kakuhle. Mna singqongwe ngabantu abathanda kum ecaweni kodwa hayi luluvo ukucela njani uncedo, okanye ukuchaza indlela into endiza thru. UThixo wagqiba ukusebenzisa kuwe, yonke indlela esuka eTexas. Enkosi!
julia atyabukile • EyeDwarha 25, 2014 ngexesha 3:01 pm • impendulo
Enkosi kakhulu le ngoma akhuthazayo. Andikwazi kulinda ukufumana icwecwe yakho entsha. thina (bazali bam) yamkelwa nje inkwenkwe encinane evela Haiti. Uye zedumbe lengqondo. Nangona iye indlela nzima yonke abakhubazekileyo bakhe, Ndiyazi ukuba uYesu usinika uloyiso phezu kweento zonke. Ndikubonile kwikonsathi e Salt Lake City, iiveki UT isibini eyadlulayo, kwaye ungandinika ithemba. Enkosi!
Kwaye Siyavuyisana nawe kunye Mrs. phezu omncinane entsha. nokuba yena (okanye lwakhe) uzelwe okanye. :) Uthando bafo!
akho • EyeDwarha 26, 2014 ngexesha 8:15 mna • impendulo
uhambo, Ndiza kude base isihlwele wakho kulindeleke njengoko umntu afumane…mama abaNtsundu waseKhanada ezintlanu oqhuba van encinane! Kodwa ubukhe evela izithethi bam kusoloko kukho rap kunye nokujikeleziswa ngokuthe Trip Lee! Ndiyamthanda ingoma Sweet Victory kunye nale nyaniso into birthed ngendlela entsha esuka kumzabalazo wakho impilo achukumisa nam. Kuba wokugqibela 8 kweminyaka Ndiye wayesilwa ubuthathaka efanayo emva kokuzalwa kolusu intombi yam. Yinto indlela sizive ukuhamba nomnye mna abasafunda uthembe uThixo. Enkosi ukwabelana ithemba lakho nokubonelela umzekelo indoda unashamed kaThixo abafana ukuhlonela lilinganise. Iintsikelelo kuwe, Bro!
ye • EyeDwarha 30, 2014 ngexesha 9:59 mna • impendulo
Nkokozelo yelicwecwe izolo yaye ndiyakuthanda oko! fav yam “Bonke Rise Up”; Ndiya kuba phezu sadlala… hleka kakhulu… nibulela ngenxa album Uhambo emangalisayo. Ithemba ukubukela kuwe kwikonsathi ngenye imini.
Gąbka • EyeNkanga 7, 2014 ngexesha 8:12 pm • impendulo
Wowu. Oku ixesha lam lokuqala ukuza liphela kule sayithi kwaye ndiza onothando zonke izithuba Ndiye ndafunda kude. Ndiye usikelelekile kwaye encouraged.This kanye oko ndikufunayo ngawo lo mzuzu ukwazi ukuba nangona ubuthathaka bam nangoku ungukumkani ebomini bam kwaye mna khangela kuye usoloko kuphakanyiswa.
Ndandingazi ukuba bayihambahamba oku, wena emithandazweni yam. Ndiyabulela kakhulu ngenxa yokwabelana. UThixo anisikelele kangaka.
Nje wamphulaphula Sweet Victory kwaye bendikhe njalo nisikelelweyo ingoma yakho! Mna ke andinako kulinda ukuphulaphula yonke yelicwecwe. Ndiqinisekile ukuba konke Ndiyakube bayaziva ezi veki ezayo. Qhubeka umsebenzi olungileyo!
latasha • EyeNkanga 8, 2014 ngexesha 7:54 pm • impendulo
Esi sithuba blog yaba yintsikelelo enjalo kum. rhoqo, Andiziva kuqondwe yintsapho, abahlobo, okanye usapho ecaweni kule uhambe, kodwa esi sithuba ndincede ndenze izinto ngendlela kwaye uyeke sikhalazela ngobomi. Ndaqonda ukuba kukho intsikelelo ngaphakathi ubuthathaka bethu. UThixo ubonisa ngokwenene amandla akhe / uthando kuthi, ngokusinceda soyise yimizabalazo yethu, xa sifumanisa ukuba Nguye kuphela indlela kukugcina ukuphuma. Enkosi isithuba kwaye nengoma yakho Sweet Victory kuyamangalisa!
Makube lubabalo, noxolo,
TTunique • EyeNkanga 17, 2014 ngexesha 9:42 mna • impendulo
Intombi njengenqogu le ngoma kum. Ndandingakwazi ndiyeke ukuphulaphula ekhala. Ndiye ndizama imiba inkqubo igonyekile 15 kwiminyaka. Okokugqibela 3 iminyaka kufuphi esihogweni. Kodwa uNdikhoyo wayethetha nzima ngentliziyo yam ngelo xesha. ekugqibeleni Ndinayo waza kwiNgxowa kuye. Ngoku ukufumana iimpendulo ekhohlo ne ekunene kwaye ephuma kancinci. Mna ndingelilo yonke indlela, kodwa mna njengoko ndidiniwe njengoko. Iyamangalisa!!! le ngoma……le ngoma! iinyembezi……
tim • EtiMnga 4, 2014 ngexesha 1:56 mna • impendulo
Ndisoloko ndiziva nemvo luvuyo xa eve ingoma entsha kuwe okanye ubone intshumayelo ngeposi okanye ukufunda blog yakho. Wena bavuselela! Andazi ngqo into CFS ufana kodwa mna lo ndibonile. A bahlobo Umama yam wecawa nto. Kukho amaxesha xa sibona ke kuye kukho kwimigama elide xa musa. Kodwa xa ndiya kwenza ukumbona usoloko bevuya. Xa ufunda le ndicinge ngaye kuba ndithi kuye lonke ixesha kangakanani mna waphefumlelwa ukuba phakathi yonke encoma uYesu. Uye wakwazi- kuba uyala ukuba bacinge phantsi le meko. Wena ezimbini ezizezona ngokuqinisekileyo abaphumeleleyo! Ndiyavuya ukuba bakwazi ukwabelana intliziyo yakho nathi. Oko kuthetha lukhulu kum.
Burton • EtiMnga 4, 2014 ngexesha 8:54 pm • impendulo
Awazi ukuba yimalini kuthetha kum oku. Xa kubonakala ngathi ihlabathi liphela ngani, uyazi ukuba uza kuphumelela ekupheleni kunye imibala esiphaphazelayo! Kwaye ngoku sisazi ukhule bayihambahamba minyaka isixhenxe idlulileyo, ukuba wazi ukuba emithandazweni yam Bro. Enkosi ukuvula iintliziyo zenu.
Femi • EyoKwindla 16, 2015 ngexesha 5:58 pm • impendulo
uhambo, wena ubakhuthaza enkulu. Unyuko albham kakhulu kwaye ndiyayithanda! Njengoko ngokuphathelele impilo yakho, i believe nje lilangatye yaso okwexeshana afflicton ulungiselela kuni uzuko kutyhilwa. UThixo wammisa ukusebenzisa kuwe umzalwana ngaphezulu. ngoko musani ukutha. ukugcina bakholwayo yaye ndithandaza. Ndiyakuthanda umzalwana.
nate • UTshazimpuzi 26, 2015 ngexesha 9:13 pm • impendulo
Ukudinwa Chronic iye yathwaxwa ubomi bam xa ndandineminyaka 13 okanye 14 ubudala yonke indlela de umcimbi kuphela kwiiveki ezidlulileyo (Ndivuya 28 ngoku). Iminyaka umthandazo kunye nophando ekugqibeleni kwakhokelela usapho lwam kwaye mna ukuba impendulo; Ukutya ke ingcambu unobangela. Ngokususa zonke iinkozo, ideri, nightshades, kwisigcinakaliso kunye nokutya oluvela ubomi bam kukhokelele tu. Mna andizange ndaziva ngcono.
Andazi ukuba kwakunokubakho isisombululo efanayo yokutya ukuze CFS zakho, kodwa mna ndifuna nazi kakade.
Qhubeleka nomsebenzi omhle. Ndiyakube ndithandaza kuwe.
ThomLomas • EtiMnga 7, 2015 ngexesha 4:29 pm • impendulo
Enkosi ngokwabelana la mazwi. Ndinqwenela ukuba ndifunde kulo nyaka uphelileyo, kodwa mna awenzelwa ukuba ukufunda ngayo kude kube ngoku. Ke kaloku, ukuba ndibe ukuqonda ngcono kancinci kutheni kwenzeke ezi zinto. Enkosi kwakhona, inkosi ikusikelele.
brandon Martinez • UTshazimpuzi 23, 2016 ngexesha 12:49 pm • impendulo
Ndiyakuthanda atripe lee wena ungumzekelo indima enkulu eyoyikekayo ukuba uhambo lwam ukholo kuThixo. Ive wafunda ukuba ungamthemba ezixhasayo ndafunda ukuba izibhalo xa libhekisela kubomi bam babe iintsikelelo ngeendlela ezininzi kangaka. Kwakho kukulukuhlile ngenene kwaye ndiyathemba ukuba ngenye imini uya kundinika ithuba ukudibana wena lecrae nobabini indincedile kubona bomi endaweni ukufa. Ngemihla ndimamele kweVangeli hip hop kwaye uqale kusasa wam uthixo enifika ngenxa uvuka nam ukuya koko ndenze ikofu wabeka bluebuds zam ezindlebeni zam, babuya kwi iindaba hip hop kwaye umamele sifundo koyikisa amagama I dont ndiyazi kwi kwisichazi magama i dont eziqondwa ndenjenjalo lnow intsingiselo enzulu kuba im nzulu enzulu. Omnye Thandazani neentliziyo Umnqweno wam kukuba ukuthetha nani ngendlela umntu usuku nokuba nje eyayo iposi embalwa kwi facebook okanye ufowune kodwa kuba kuhle ukuba ahlale phantsi kunye nawe buqu nokuxoxa zibala ngeenkolelo abangamaKristu ukuphendula ngamnye abanye imibuzo kunye nenkxalabo. ndingu 26 uye ubudala mna imvelaphi yayimbi elidlulileyo kunye noKristu ndatshintsha kum imihla ngemihla yonke uzuko lwakhe kunye olungileyo ngakumbi ukuze ndikwazi ukufikelela phandle ikhuthaze abanye ubungqina bam ebonisa ngezenzo zam nje ngamazwi . Im likholwa. KwabaseRoma 1:16 Mna unashamed yevangeli. Ndiya kuthetha ngayo uthixo everday nabantu nditsho nabahlobo bam khangela phezulu kum baligqitha ngenxa indlela uThixo ndatshintsha. ngokwenene ndithemba ubona lo myalezo kum uyifunde yonke. Ibali yakho iluqilima kwaye uKristu entliziyweni yakho kusoloko. Nceda ukuba unalo ixesha ngosuku wokubhaliweyo omnye kum. Nditsalele umnxeba. Bhala kum facebook. Imeyile id bathanda ukuba kube nje incoko enye nawe. BTW ibali lakho zehla iinyembezi emehlweni am. inkosi ikusikelele,umfazi wakho,yaye abantwana yonke imihla yakho yonke osukuba uyenza.